“Dawladnimadu “Waxey ila Tahay” Kuma Shaqeyso. Distoor Ayey Ku Dhaqantaa “ | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
“Dawladnimadu “Waxey ila Tahay” Kuma Shaqeyso. Distoor Ayey Ku Dhaqantaa “
Gurmadka loo gurmanayo dadka abaartu heyso shuruud kuma xidhna. Waxa ay aheyd inan hawlaheena kale oo dhan hakino oo loo kaco dadkaasi. Waxa ay aheyd in miisaaniyadda dawladda ee 2017 ee iminka la ansixiyey Wasaarad kasta laga jaro 10% oo loo qoondeeyo taakuleynta abaaraha. Waxa ay aheyd in xildhibaanada iyo wasiirada oo ah dadaka uugu mushahar badan ay 3 bilood mushaharkooda iska gooyaan oo an uugu deeqaan gurmadka abaaraha. Waxa ay aheyd in ardeyda la baro isu naxariisashada oo inta sanaaduuq la dhigo iskuulada la yidhaa ardeygii kari kara kun shilin iyo wixii kale ee uu karo ha ku rido. Warran Cadde deyrka idaacadda waxa uu ku dhisey ardeyda ayuu weydiistey in mid kastaa keeno xabbad laban ah. Waxa ay aheyd in ummadu ay maalin jaadka ka soonto oo lacagtii ku bixi jirteyna loogu deeqo abaarta. Waxa ay aheyd in reer kasta oo magaalo jooga oo ladan uu marti geliyo reer abaarta ka soo qaxey oo bal ugu yaraan uu daaradda seexiyo, waa reer miyi oo daaradaasi oo ay seexdaan ayaaba ka badan. Bariiska yare e an cuneynana wey ianala cuni lahaayeen. Waxaasi oo dhan waxa inaga indho tirey siyaasada iyo kursi. Shicibka waa ka daacad oo dadkooda ayay u naxayaan. Siyaasiga kursigaasaa u muuqda, haddii uu arko in fursaddii uu ku heli lahaa kursigu yartahay, xaalkiisu waa aloow dhagaxyo soo daadi.